အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: Introduction to D Family Businesses (DFB)
Introduction to D Family Businesses (DFB)
Welcome to D Family Businesses (DFB)
D Family Businesses was founded in December 2011 by young Myanmar Community Services Professionals returning from their assignments abroad with international organisations. Firstly it was operational and known as D Place Consultancy Services and it expects to fulfil the needs of marginalised communities, civil society groups and NGOs and UN agencies in Myanmar.
The D Place, Consultancy
We are runningasmall consultancy firm providing customized trainings, organizational development, human resources management, monitoring and evaluation, community led research focusing in health sector for CSO, NGOs and UNs
We also provide Interpretation services, moderating and facilitation for meetings and events
Translation of documents and power points from English<>Myanmar, English<>Karen, English<>French, English<>Chinese
More information for our services please visit our website at www.thedplace.com and our facebook at www.facebook.com/thedplace
D Place Consultancy Services offers following consultancy services to businesses, community organisations, local NGOs, International NGOs and UN agencies:
basic human rights, child rights, women rights
ART Treatment Literacy
Media Awareness Trainings
Events Management (Events Management is now taken care by D Pop)
arrange location and catering
invite guests, media
Interpretation, Translation and Documentation Services
Conference/Workshop Simultaneous Interpretation
Conference/Workshop Consecutive Interpretation
Human Resources: System Set-up, Manual Development
D Pop ဆိုတာ......?
d pop – beyond limitation
· What is Pop Up Business?
· Pop up စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာ ဘာလဲ?
o HavingaPop Up Business is not something new!We do it often, so do our friends and loved ones. Selling old goods, havingacharity fun fair oragallery display of contemporary fine arts, homemade products and services introduction,fundraising, or you just want an exclusive party with your close friends or company dinner for your staff party, staff team building, booking reading,press shows for movies, album introduction press shows etc which is temporary but all important to us.
o Pop up ဆိုတာ တကယ်တော့ ဘာမှ ထူးဆန်းတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအသစ် တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုးအရင်ကတည်းက ကျတော်တို့တွေ၊ ကျတော်တို့ချစ်တဲ့သူတွေ၊ကျတော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ လုပ်နေကြပုံစံမျိုးပါပဲ။ အိမ်ထောင်သုံး ပရိဘောဂ ပစ္စည်းအဟောင်းတွေရောင်းတာမျိုး၊ ပရဟိတ ရံပုံငွေဈေးရောင်းပွဲလေးတွေ၊ အနုပညာပစ္စည်းတွေ ခင်းကျင်းပြသချင်တာမျိုး၊အိမ်တွင်းဖြစ် ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ ဝန်ဆောင်မှု အသစ်မိတ်ဆက်တွေ၊ ရံပုံငွေပွဲတွေ၊ ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သီးသန့် ပါတီပွဲလေးကျင်းပ ချင်တာမျိုး၊ ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုတိုးတက်စေမယ့် ကုမ္ဗဏီဒင်နာလေးတွေ၊ ပွဲလေးတွေ၊ ဗီဒီယို ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ပွဲ၊ စာ၊ ကဗျာဘတ်ပွဲ၊ တေးစီးရီးသစ်မိတ်ဆက်တွေ စသဖြင့်ပေါ့ လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေကတော့အားလုံးလိုလို အခိုက်အတန့် သဘောပါ ဒါပေမယ့် အားလုံးကလဲ စီးပွားရေလုပ်ငန်းတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းက ပါပါတယ်။
o D Pop is ready to help you with this and will offer youaplace, and other services such as catering, inviting guests,distributing your leaflets, and any other services you may need.
o ဒါတွေအားလုံးကိုကူညီဖို့အတွက် D Pop ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ D Pop ကနေ ဒီလို ပွဲငယ်မျိုးလေးတွေလုပ်ဖို့အတွက် နေရာထိုင်ခင်း နဲ့ အခြားဝန်ဆောင်မှုတွေ။ အစား အသောက်၊ ဧည့်သည်ဖိတ်ကြားခြင်း၊မီဒီယာတွေကို ဖိတ်ကြားခြင်း၊ လက်ကမ်းစာစောင် ဝေပေးခြင်း စတဲ့ သင်တို့လိုအပ်တဲ့ လိုအပ်မယ့်ဝန်ဆောင်မှုတွေ အားလုံးကို တတ်စွမ်းသမျှ ဖြည့်စည်းပေးဖို့အတွက် D Pop အဖွဲ့ရှိပါတယ်။
o You are welcome to talk to our professional on how you want to arrange your birthday party, annual staff party,a3 day gallery show, fundraising of community organizations and anything you want us to help you.
o လူကြီးမင်းတို့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေ၊နှစ်ပတ်လည် ကုမ္ဗဏီ ပါတီတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ၃ ရက်တာ ပန်းချီ လက်ရာပြပွဲတွေ၊ အနုပညာ အခင်းအကျင်းတွေ၊လူထုအခြေပြုအဖွဲ့လေးတွေအတွက် ရံပုံငွေ ရှာဖွေပွဲလေးတွေ နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့က လိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးကို ကျတော်တို့ D Pop ရဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတိုင်ပင်မှုတွေပေးဖို့အတွက်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
o Save your time, save your money and save your energy. Let us take care for you. Even the sky cannot limit your dreams and we are here to make it come true.
o လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေ၊ ငွေတွေ၊ အင်အားတွေကို စီမံခန့်ခွဲမှု ကိစ္စသေးသေး လေးတွေနဲ့ခေါင်းရှုပ်မခံပါနဲ့။ D Pop က အားလုံးကို တာဝန်ယူပေးပါရစေ။ တကယ်လို့ ကောင်းကင်ကြီးကတောင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့၊ လုပ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တွေကို အဆီး အတား မဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ D Pop ကလဲ တတ်စွမ်းသလောက်ကူညီချင်ပါတယ်။
D Pop – Beyond Limitation…
D Pop - ကန့်သတ်ခြင်းများ အလွန်…
Addy CHEN @ Aung Myo HTUT | Director
D Family Businesses
Tel: 09-5080052 | 09-250535322 | 09-450009116
dpop@thedplace.com | www.thedplace.com
Introduction to D Bistro ~ Brought to you by D Place
Posted by Addy Chen · November 19, 2014 at 2:30pm
EAT . DRINK . SOCIALIZE
Coffee fans, healthy juice and smoothies’ lovers, couples, families and friends –
Thinking ofafriends reunion, light family gathering, or just to sneak out fromaboring workplace and sit foracoffee or drinks or just hadawonderful time atD Spa and thinking ofasalad bowl with green smoothies or cocktails while having your great pedi/mani?
DBistro is the definite place for you….
· Coffee, tea, healthy fresh fruit juice and smoothies
· Pizza, cookies, garlic breads
· Fried rice and noodles
· Soups and Salads
· Steaks and Skewers
ကော်ဖီချစ်သူတွေနဲ့ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု သစ်သီးဖျော်ရည်ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ၊ ချစ်သူစုံတွဲတွေ၊မိသားစု တွေ နှင့် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေအတွက်…
သူငယ်ချင်းတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့မိတ်စုံစားပွဲလေးစဉ်းစားနေပါသလား၊ မိသားစု ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ထမင်းလက်စုံ စားချင်ပါသလားဒါမှမဟုတ် ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ် အလုပ်ကနေ ခေတ္တခဏ ပြေးထွက် ပြီး ကော်ဖီစိမ့်လေး တခွက်၊သစ်သီးဖျော်ရည် အေးအေးလေး တခွက်နဲ့ အနားယူချင်ပါသလား၊ ဒါမှမဟုတ် D Spa မှာ လက်သည်းခြေသည်းပြုပြင်ရင်း၊ အနားယူ အနှိပ်ခံရင်း အရွက်သုပ်လေး တပွဲ၊ ကော့တေးလ်လေးတခွက်လောက်သောက်ချင်စိတ်ဖြစ်လာရင် ……..
သင့်အတွက်D Bistro က အနားယူနိုင်တဲ့ နေရာကောင်းလေး တစ်ခုပါ။
· ကော်ဖီမျိုးစုံ၊ လက်ဘက်ရည်အမျိုးအစားစုံ၊လတ်ဆတ်တဲ့ ရာသီပေါ်သစ်သီးဖျော်ရည်တွေ နဲ့ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု စမူးသီးတွေ
· ပီဇာ၊ ကြက်သွန်ဖြူကပ် ပေါင်မုန့်ကင်၊ကွတ်ကီးမျိုးစုံ
· ထမင်းကြော်များ နှင့် ခေါက်ဆွဲများ
· ဟင်းရည်များ နှင့် အရွက်သုပ်များ
· အသားကင်ပြားများ နှင့် ဆာတေးမျိုးစုံ
D Family မှ အသစ်တင်ဆက်မှု...D Spa (Unisex Spa)
a touch of magical hands –amoment of life
DSpa is opened to give you authentic spa experience by very well trained professional spa therapists. For both men and women but in separate unique chambers, D Spa with atmosphere of relax, freshness and hospitality.
ပညာရှင်အဆင့်ကျွမ်းကျင်အနှိပ်ပညာရှင်များရဲ့ စစ်မှန်သော Spa အထိအတွေ့ကို ခံစားနိုင်စေဖို့ D Spa ကိုဖွင့်လှစ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ D Spa မှာဆိုရင် သာယာငြိမ့်ညောင်းတဲ့ဆိတ်ငြိမ်မှု၊ အသစ်တဖန် ပြန်လည်လန်းဆန်းစေမှု ၊ စစ်မှန်တဲ့ ဖော်ရွေမှု တွေနဲ့ ထူးခြားတဲ့Spa အတွေ့အကြုံကို အမျိုးသမီး များရော၊ အမျိုးသားများပါ ကိုယ်ပိုင် သီးသန့်ခန်းတွေနဲ့ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
· Thai TraditionalMassage
· Facial and BodyTreatments (Scrub, Mask and Cleansing)
· Manicure / Pedicure
· Personal Sauna
DSpa ကနေရနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့…
· ထိုင်းရိုးရာ အနှိပ်
· အဆင့်မြင့် နည်းပညာ၊ သဘာဝအော်ဂင်းနစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသော အနှိပ်ဆီဖြင့် နှိပ်နယ်ခြင်း
· ရနံ့ကုထုံး နည်းပညာဖြင့် နှိပ်နယ်ခြင်း
· မျက်နှာ နှင့် ခန္ဓာကိုယ် ပေါင်းတင်ခြင်းကုထုံး(စခရပ်၊ မျက်နှာပေါင်းတင်၊ အဆိပ်ထုတ်၊ ဆေးကြောသန့်စင်)
· နွမ်းလျနေသောခြေထောက်များကို အကြောဖြေနှိပ်နယ်ခြင်း
· လက်သည်း၊ ခြေသည်း ပြုပြင်၊ သန့်စင်ခြင်း
· တကိုယ်ရေသုံး ချွေးထုတ်ခန်း
· ခန္ဓာကိုယ်ရှိ မလိုအပ်သော အမွှေးအမျှင်များကိုအဆင့်မြင့်ဖယောင်းနည်းပညာဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်း
Spa D’lax was opened on 6thof July 2014 at No (35), ThuKha Street, MyaeNiGone, San Chaung Township to bestserve the men from head to toe for their styling to their wellbeing.
Spa D’lax services include Hair Dos, Skin care and spa treatment to relax body and mind. Internationally well-knownand recognized Wat Po School massage techniques would be used and all of thespa products were selected carefully from Thailand, Europe and Americas and areorganics.
In Yangon, there are still very limited numbers of professional spa exclusively for men. Spa D’s lax was born to offer all the men withaspace to receive such styling and spa experiences.
Spa D’lax ကို ခေတ်မီသော အမျိုးသားများ၏ဆံပင် နှင့် အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အမှတ် (၃၅) သုခလမ်း၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်အတွင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။
Spa D’lax ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ
Spa D’lax ၏ ထူးခြားချက်မှာ နာမည်ကြီးသောထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဥရောပ နှင့် အမေရိကမှ အရည်အသွေးမြင့် Spa ထုတ်ကုန်များကိုသာ အဓိကအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နည်းပညာများအဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ရိုးရာအနှိပ်ကျောင်းအဖြစ်နာမည်ကြီးသော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြု Wat Po (ဝပ်ဖို) နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်း၊ခေတ်မီသန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော အခန်းအပြင်အဆင်များ၊ ငြိမ့်ညောင်းသာယာသော တေးသံသာ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိခြင်း၊ဖော်ရွေသော ဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
Spa D’lax – for men
“think relax ~ think D’lax”
Spa D’lax - for MEN
No. 35 | Thukha Street | Near Sake Taing Kya Tea House (from Ma Po Road) | Myaenigone North | San Chaung Township | Yangon | MYANMAR
Tel: 09 – 4211 44848 | 09 25339 8886 ~ 7
Spa D’lax is specially dedicated to modern and smart guys, who are unique in fashion and care for their wonderful skin: health and grooming services are available.
With well-trained, skilled professional staff, friendliness and welcoming hospitality, Spa D’lax is offering services exclusively for men
Enjoy our boutique spa with quality essence products, utmost freshness, clean and spacious rooms, calming and soothing atmosphere withatouch of skilled professionals.
· Signature facial treatments
· Rejuvenating aromatherapy massages
· Refreshing body polish (body scrubs)
· Signature Milk Cleansing and Milky touch treatment
· Repairing Body Masks
· Relaxing Traditional Thai massage
· Expert Body Waxing
Come visit us and haveasweet memoir for your life encounters.
Posted by Addy CHEN at 5:38 AM